ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း အလေးချိန် မြင့်မားလာခြင်း ဘယ်အရာက ကျန်းမာပြီး ဘယ်အရာက မကျန်းမာသလဲ? – Similac
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း အလေးချိန် မြင့်မားလာခြင်း ဘယ်အရာက ကျန်းမာပြီး ဘယ်အရာက မကျန်းမာသလဲ?
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း အလေးချိန် မြင့်မားလာခြင်း : ဘယ်အရာက ကျန်းမာပြီး ဘယ်အရာက မကျန်းမာသလဲ?
ဘာကြောင့် သင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကို သတိပြုသင့်လဲ?
အချို့သော မိခင်များသည် သူတို့၏ အလေးချိန်တိုးလာခြင်းကို အထူးအလေးထားပြီး ကလေးကြီးထွားခြင်းအတွက် မိမိတို့ကိုယ်တိုင် အစာများများ စားရမည်ဟူ၍ အမှတ်လွဲနေကြသည်ဟု ဆရာဝန် တန်က ဆိုသည်။ အမှန်မှာ သင့်အလေးချိန် တိုးလာလျှင် သင့်ကလေးလည်း ကြီးထွားလာမည်၊ ထွားသောကလေးသည် မီးဖွားရန်ခက်ခဲပြီး မိခင်အတွက် ဝိတ်ချရန်လည်း ခက်ခဲစေမည်။
ထို့ကြောင့် အလေးချိန် တိုးရန် ညွှန်ကြားခြင်းကိုလည်း ပြန်စဉ်းစားရန်လိုအပ်မည်။ ကျန်းမာရေး အဆင့်မြှင့်ခြင်း ဘုတ်အဖွဲ့က အဆာပြေ စားစရာများအား လိုအပ်သော ကယ်လိုရီအတွက် စားသုံးရန် ညွှန်ကြားသည်။ အမျိုးသမီးအများစုသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း 10 ကီလိုမှ 12 ကီလိုအထိ တိုးလာကြသည်။11
အစားအသောက် လျှို့ဝှက်ချက်မျှတသော အစားအသောက်သည် အစာအုပ်စု အမျိုးမျိုးအား မျှတအောင် စားသုံးခြင်း၊ အာဟာရကြွယ်ဝသော အစားအသောက်များကို ရွေးချယ်စားသုံးခြင်း ကယ်လိုရီစားသုံးမှုအား ဂရုစိုက်ခြင်းတို့အား ကိုယ်ဝန်ဆောင်များအတွက် အားပေးသည်။
Dr Tan အဆိုအရ အမျိုးသမီးများသည် အာဟာရကြွယ်ဝသော အစားအသောက်ကို အာရုံစိုက်ရန်လိုသည်။ လတ်ဆတ်သော သစ်သီး၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်တို့အား လိုအပ်သည့် ကယ်လိုရီဓာတ်အတွက် စားသုံးပြီး ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့် အဆီတို့အား လျှော့ချခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် မီးဖွားပြီးချိန်အထိ ဖောလစ်အက်ဆစ် ဖြည့်စွက်စာသည် ကလေး၏ ဦးနှောက်နှင့် ကျောရိုးချွတ်ယွင်းချက်များအား ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။12 ဖောလစ်အက်ဆစ်၏ အဓိက အရင်းမြစ်သည် စီရီယယ်နှင့် နို့ကဲ့သို့သော အာဟာရဓာတ်ကြွယ်ဝသည့် အစားအသောက်များဖြစ်သည်။အချို့ဆရာဝန်များသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်များနှင့် နို့တိုက်မိခင်များအား ဗီတာမင်အမျိုးမျိုး၊ ကယ်လ်ဆီယမ်နှင့် DHA ပါဝင်သော ဖြည့်စွက်စာများ စားသုံးရန် တိုက်တွန်းကြသည်။
Dr Tan ရှင်းပြချက်အရ သင့်အစားအသောက်တွင် တိကျသော ပမာဏနှင့် ဖြည့်စွက်စာပါဝင်လျှင် အကျိုးရှိသည်။ သို့သော် မျှတသော အာဟာရသည် လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် မိသားစု ဆက်ဆံရေးနှင့်လည်း ဆိုင်ပြီး ပျော်ရွှင်သော ကိုယ်ဝန်သည်၊ ကျန်းမာသောကလေး ရရှိခြင်းအတွက် အဓိကပင် ဖြစ်သည်။